Kpido: wpseo_canonical | Martech Zone
Mgbe anyị bugara saịtị anyị na Flywheel, anyị anaghị amanye onye ọ bụla ka ha banye na njikọ SSL (https: // url nke na-eme ka njikọ dị nchebe). Anyị amabeghị mkpebi na nke a. Anyị nwere ike ijide n'aka na ntinye akwụkwọ yana akụkụ ecommerce echedoro, mana ejighi n'aka gbasara naanị ederede ị ga-agụ. N’iburu nke ahụ n’uche, anyị ghọtara na njikọ ndị anyị na-ede n’akwụkwọ ga-abụ nke nchebe na ntụkwasị obi. Agụbeghị m ọtụtụ na